जनताले तिरेको करको दुर्दशा यही हो ? «
नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो । हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर पनि चिनिन्छ । तर, प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण देशमा फोहोरमैलाले भरिएको राजधानी र बाटोमा फोहोर थुप्रिएको देख्दा मन असाध्यै दुख्छ । बाटोमा हिँड्ने यात्रु र सवारी चालकहरूलाई पनि सहज छैन । हामीले यस्तो समस्या कहिलेसम्म देख्ने हो सरकार ? नेपाली नागरिकले हरेक वर्ष कर तिरिरहँदा पनि किन हाम्रो देशमा सडकको व्यवस्था राम्रो हुन सकेन ? नेपाली जनताले फोहोरमैलाविहीन सफा र स्वस्थ जीवन बाँच्न किन नपाउने ?
काठमाडौँमा बसोबासका लागि अन्य जिल्लाबाट आएका मानिसहरू कोही व्यापार–व्यवसाय गर्छन् भने कोही जागिर गर्छन् । आफ्नो हैसियतअनुसार काम गर्ने मानिसलाई पनि सहज छैन । आदरणीय नगरप्रमुखज्यू, तपाईंहरूले फुटपाथमा व्यवसाय गरेका मानिसहरूलाई मात्र देख्नुहुन्छ, तर त्यो फोहोरको थुप्रो देख्नुहुन्न ।
सुन्नुहोस् नगरपालिकाका कर्मचारीज्यूहरू, दुःख गरेर सञ्चालन गरेको ससाना व्यवसाय उठाउन सजिलो, तर फोहोर उठाउन किन गाह्रो ? हुन त हो, ‘नगर’ भन्ने शब्द अगाडि भएको हुनाले नगरेको हो कि ? गरिब–दुःखीलाई यातना दिँदा तापाईंहरूलाई रमाइलो लाग्छ ? तर बिन्ती छ, सर्वसाधारणलाई स–साना व्यवसाय गरेर खाने ठाउँको व्यवस्था गरिदिनुहोस् । उनीहरूको सामान नउठाउनुहोस् र लाठीचार्ज नगर्नुहोला । यत्रो ठूलो सहरमा सबैले आफ्नो उज्ज्वल भविष्यÞका लागि मेहनत गर्छन् । गरिब दीन–दुःखीले हरेक दिन एक–एक पैसा जम्मा गरेर आफ्नो ठूलो सपना देखेको हुन्छ । गरिब–दुःखीको सपनामा पानी नहालिदिनुहोला ।
आदरणीय नगरपालिकाज्यू, फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई सजाय दिने होइन, ती हातहरूलाई सजाय नदिनुस् । सजाय त तिनलाई दिनुहोस्, जसले देशलाई फोहोरको भरिपूर्ण डङ्गुर बनाएका छन् । जता हे¥यो त्यतै फोहोरको थुप्रो छ सरकार, यो कहिलेसम्म हुन्छ ? जनचेतनाको कमीले गर्दा मानिसहरूले जथाभाबी फोहोर फ्याँकेको हो त ? कि नगरपालिकाको गाडी नआएर जनताले बाध्य भएर टोलटोल, गल्ली–गल्ली र सडक र खोलाको किनारमा फोहोर थुपारेका हुन् ? सुन्नुहोस् आदरणीय सरकार, दिन–प्रतिदिन मानिसहरूको मृत्यु बढ्दै छ । त्यहाँमाथि कोभिड–१९ को आक्रमणले दिनहुँ मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ । वातावरण राम्रो भए पो सबै नेपालीहरू स्वस्थ हुन्छौं । यहाँ सरकारलाई चाहिँ स्मार्ट लकडाउन चाहिने ! सुन्नुहोस् सरकार, स्मार्ट लकडाउन त भन्नुभयो, खोइ त स्मार्टनेस देश ? उस्तै फोहोरमैला र सडक खाल्डो छ । हाम्रो देश सुन्दर शान्त भए पो स्मार्ट हुन्छ नि । हाम्रो देश नेपालमा जबसम्म फोहोरमैलाको व्यवस्थापन हुँदैन, तबसम्म नेपालीहरू स्वस्थ हुँदैनन् । जबसम्म हाम्रो देशको पक्की सडक बन्दैन, तबसम्म सवारीचालकको मृत्युुदर घट्दैन ।
भत्किएको र खाल्डो भएको सडकका कारण कतिपय निर्दोष मानिसले ज्यान गुमाउन पुगेको विदितै छ । नेपाली जनताले खाइनखाइ गरी तिरेको करको फल यही हो त ? जनताले कर तिर्छ भने जनतालाई पनि सफा, हराभरा भएको समाजमा निर्धक्कले बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आज राजधानीको अवस्था त यस्तो छ भने झन् बाहिर जिल्लाको अवस्था कस्तो होला ? त्यसैले समयमा नै सम्बन्धित निकायको यस विषयमा ध्यान जाओस् ।